आजको राशिफल साउन २७ गते मंगल बार : पाथी भारा माताले सबैको क`ल्या ण गरुन ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/आजको राशिफल साउन २७ गते मंगल बार : पाथी भारा माताले सबैको क`ल्या ण गरुन !
मेष (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ)–इच्छा शक्ति बढ्नु`का साथै प्रयत्न गरेको काम छोटै समयमा पूरा हुन सक्छ । परम्परालाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्न सकिने छ । विशेष समारोहबीच प्रतिष्ठा, मान–सम्मान आदि पाइने छ । स्वा`दिष्ट भोजनको आनन्द मिल्नेछ । परिवारजनसँग आत्मीयता बढ्नेछ । प्रेम र मित्रताको गाँठो कसिएला । कामबाट पनि फुर्सद पाइने छ । प्रशंसकहरू बढ्नेछन । आक्षेप लगाउनेहरू नि`ष्क्रिय हुनेछन ।
मिथुन (का, कि, कु, घ, ङ, छ, के, को, ह) –लामो समयदेखि रोकिएको काम बन्नुका साथै आम्दानीको स्रोत समेत बढ्नेछ । व्यावसायिक काममा राम्रै फड्को मार्न सकिने छ । साझेदारी र सट्टापट्टामा विशेष लाभ मिल्नेछ । नयाँ जिम्मे`वारी पाइएला । श्रमको उचित मूल्या`ङ्कन हुनेछ । पितृ`धनको उपयोगबाट विशेष फाइदा होला । सोचेभन्दा राम्रै लाभ हुनेछ । आतिथ्यपूर्ण सम्मान पाइएला ।
कन्या (टो, प, पि, पु, ष, ण, ठ, पे, पो) –मिहिनेत र परिश्रम खेर जाँदैन, लगानी, दौडधुप, श्रम र प्रयत्नको उचित मूल्य प्राप्त हुनेछ । अप्रत्याशित उपलब्धी प्राप्त हुँदा मनमा उमङ्ग पलाउने छ । अनुभवी र जान्नेबुझ्नेको रायसल्लाह लिई नयाँ काममा हात हाल्दा राम्रो हुन्छ । गरी आएका व्यापार व्यवसाय र कामधन्दाका क्षेत्रबाट पनि फाइदा नै हुनेछ । नचिताएको मान्छेको सहयोग पाइने छ ।
तुला (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) –नयाँ ज्ञान सिक्ने मौका छ । पढाइमा प्रगति हुनेछ । व्यवसा`यका लागि यात्राको सम्भावना पनि छ । दाम्पत्य सुखले प्रफुल्लित भइनेछ । आम्दानी प्रशस्तै बढ्नेछ । नयाँ सवारी साधन प्राप्तिको योग छ । आतिथ्य`पूर्ण सम्मान पाइएला । प्रेम र मित्रता`को बन्ध`न कसिने बेला छ । कामका लागि अनुकूल समय छ । बिनाप्रतिस्पर्धा फाइदा हुने योग छ ।
बृश्चिक (तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु) –मुद्दा–मामिलामा विजयी भइनेछ । व्यापार तथा उद्योगतर्फ सामान्य फाइदाको योग छ । अधिकारका लागि केही संघर्ष पनि हुन सक्छ । प्रतिस्पर्धीहरूले अप्ठ्यारोमा पार्ने प्रयास गरे पनि अरूको हातमा गइ`सकेको अवसर जोगाउन सकिने छ । सहयोगीहरू जुट्नाले रोकिएका काम सजिलै सम्पादन हुनेछन । सानो प्रयत्नले ठूलो काम सम्पादन हुन सक्छ ।
धनु (ये, यो, भ, भि, भु, ध, फा, ढ, भे) –धार्मिक, सामाजिक र अरुको हित हुने काममा समय व्यतीत हुनसक्छ । सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु पर्नेछ । आँटेका काममा निकै मिहिनेत गरेमा मात्र सफलता हात लाग्नेछ । उद्योग तथा बन्द`व्यापारमा सा`मान्यतया फाइदा नै हुनेछ । प्रेमी÷प्रेमिकाका बीचमा मनमुटाव हुनसक्छ । आर्जित वा सञ्चित धन खर्च गर्ने परिस्थिति आउने छ ।
कुम्भ (गु, गे, गो, सा, सि, सु, से, सो, द) –अप्ठ्यारा परिस्थिति`सँग पनि जुझारु भई काम गरिने छ । बन्धुबान्धव र गुरुजनको सहयोग र बुद्धिको उपयोगले लक्ष्य पहिल्याउन सकिने छ । प्रतिस्पर्धाले पुरुषार्थी काम गर्ने हिम्मत प्रदान गर्नेछ । उद्योग तथा बन्दव्यापारबाट राम्रो फाइदा लिन सकिने छ । शुभचिन्तकहरूले पूर्ण समर्थन प्रदान गर्नेछन । पुरानो समस्या सुल्झाउन सकिने छ ।
मीन (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) –अरूको विषयमा चासो राख्दा वादविवाद हुनसक्छ । धैर्य साथ गरिएको कामबा`ट फाइदा हुनेछ । अरूलाई प्रभा`वित पारेर काम बनाउन सकिने समय छ । बोलीमा मिठास र चाकरीको व्यवहार देखाउनु पर्छ । सहयो`गीहरूले आशा गरेअनु`रूप साथ दिन सक्दैनन । मिहिनेत गरेब`मोजिमको फा`इदा लिन सकिंदैन । काममा बिलम्ब हुने लक्षण छ ।